Home Nolosha 20 xaqiiqooyin cajiib ah oo ku saabsan qalbiga (wadnaha)
Arrimo aad u baahan tahay in aad ka ogaato qalbiga
Qalbiga ama wadnaha wuxuu ka mid yahay xubnaha ugu muhiimsan jirkaaga, haddii uu shaqada joojiyana ay naftaada halis galeyso ama aad islamarkiiba dhiman kartid.
Inkastoo laga yaabo in aad waxyaabo badan la taqaanid wadnaha, haddana waxaa jira arrima ay suuragal tahay in aadan wali ogeyn.
Maqaalkan waxaan idiinku soo gudbineynaa 25 arrimood oo xiiso badan oo ku saabsan wadnaha.
1- Wadnaha cabirkiisa celcelis ahaan wuxuu la eg yahay feer duubasho. Gacantaada feer duubo oo eeg, intaas ayuu la egyahay qalbigaaga.
2-Tirada garaaca wadnahaaga uu maalin walba sameeyo waa qiyaastii150,000 jeer.
3- Wadnahaaga waxaa maalin kasta dhex mara ilaa 7570 liitar oo dhiig ah.
4- Xididdo u shaqeeya sida habka korontada oo kale ayaa haga dhaqdhaqaaqa iyo shaqada wadnahaaga.
5- Wadnaha wuu sii garaacmi karaa xitaa marka laga saaro jirka kaddib.
6- Qalliinkii ugu horreeyay ee wadnaha lagu sameeyay iyadoo jirka la jeexayo wuxuu dhacay sanadkii 1893. Waxaa qalliinkaas fuliyay Daniel Hale Williams, oo mid ahaa dhakhaatiirta dhinaca wadnaha ee faro ku tiriska ah ee madowga ah ee xilligaas ku sugnaa Mareykanka.
7- Markii ugu horreysay ee qof wadnihiisa lagu rakibay qalab xoojiya waxay ahayd 1958. Arne Larsson, oo ah ninkii qalabkaas lagu tallaalay waxaa ka hor dhintay dhakhtarkii adeeggaas u sameeyay. Larsson wuxuu isagoo 86 jir ah u geeriyooday xanuun aan la xiriirin wadnaha.
8- Qofkii ugu da’da yaraa ee qalliin dhinaca wadnaha ah lagu sameeyo wuxuu jiray hal daqiiqo oo kaliya. Waxay ahayd gabar ku dhalatay xanuun wadnaha ku dhaca oo ay ilmaha intooda badan u dhintaan. Qalliinka ugu horreeyay waa lagu guuleystay, laakiin ugu dambeyn waxay u baahatay in wadnaha laga baddalo.
9- Kiiskii ugu horreeyay ee la ogaaday in uu ku saabsanaa xanuun dhanka wadnaha ah waxaa laga helay Meyd 3,500 oo sano jiray oo yaallay Masar.
10-Wadnaha bani’aadanka culeyskiisa wuxuu ka yar yahay nis kiilo. Hase yeeshee wadnaha ninka ayaa 57 garam ka culus kan haweeneyda.
11- Xayawaan u eg jiirka oo laga helo dalka Mareykanka – ahna naasteyda nooca ugu yar – ayaa loo aqoonsan yahay in uu yahay noolaha garaaca wadnihiisu ugu dhaqsada badan yahay. Hal daqiiqo gudaheed wuxuu wadnihiisa ku garaacmaa 1,200 oo jeer.
12- Nibiriga waa xayawaanka naasleyda oo dhan ugu wadnaha weyn.
13- Geriga wuxuu leeyahay wadne hal dhinac u dheer, dhanka bidixda ah ayaana ka adag dhanka midigta ah. Sababtu waxay tahay in dhanka bidixda ah uu qulqulka dhiigga mariyo dhuunta dheer ee geriga si uu u gaarsiiyo maskaxdiisa.
14- Xayawaan sida xoonka u eg ayaa loo aqoonsaday in uu yahay noolaha ugu wadnaha yar.
15- Garaaca wadnaha dumarka wuxuu xoogaa yar ka boobsiis badan yahay garaaca wadnaha ragga.
16- Farqiga u dhaxeeya wadna xanuunka iyo qalbi jabka waa in wadne xanuunka uu ka dhasho cudur balse walbi jabka uu ka imaado walwal badan.
17- Qalbi jabka waa loo dhiman karaa laakiin aad iyo aad ayey u tahay dhif.
18- halbowleyaasha dhiigga geeya wadnahaaga haddii aad kala jiidi lahayd waxay fidsami lahaayeen 60,000 oo meyl (qiyaastii 96,560 KM).
19- Kansarka nooca ku dhaca wadnaha waa mid dhif ah, sababtoo ah unugyada wadnaha ayaa ka hor taga.
20- Qosolka wuxuu u fiican yahay wadnahaaga. Wuxuu yareeyaa walbahaarka, wuxuuna xoojiyaa difaaca jirka.
Next article11 waxyaabood oo dadka caqliga badan aysan ku dhihin goobta shaqada